Ezinụlọ Sony? E-Mount Na-etolite na Ndị Ntugharị Uzo Ọhụrụ na Ihe Nlereanya | Akụkọ akụrụngwa
Ezinụlọ Sony? E-Mount na-etolite na anya m ọhụrụ na ndị ntụgharị na-agbanwe agbanwe
Akụkọ Foto | | Ngwa, Foto
Sony ewetawo ọhụụ anọ ihe mgbaru ọsọ abuo ndị ntụgharị ọhụrụ na ezinụlọ alpha na ha na-eji E-elu. Ndị foto niile nwere igwefoto dị otú ahụ nwere ike ịchọpụta ohere okike ndị a site na iji anya m na ndị ntụgharị maka ezinụlọ a nke Sony ese foto enweghị enyo.
La nso nke okpokolo agba Typedị E kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ọ bụla, site na eserese jupụtara na mmetụta, ọdịdị dị egwu na macros mara mma, na omume ngwa ngwa na njem njem, ịghara ịkọwa foto kwa ụbọchị.
1 Ndị a bụ lenses na ndị ntụgharị ọhụụ nke Sony webatara
1.1 Distagon T FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) ​​uzo zuru oke
1.2 FE 90mm F2.8 Medium Telephoto Macro Macro G OSS (SEL90M28G)
1.3 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240) Mbugharị zuru ezu
1.4 FE 28mm F2 (SEL28F20) elu-edu obosara-n'akuku full-etiti
1.5 VCL-ECU2 nnukwu-APS-C na VCL-ECF2 ndị ntụgharị ntụgharị azụ
Ndị a bụ lenses na ndị ntụgharị ọhụụ nke Sony webatara
Zeiss Distagon T FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) ​​oghere zuru oke
FE 90mm F2.8 Macro G Ọkara Telephoto Macro G Lens OSS (SEL90M28G) Frame zuru ezu
10x bia FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240) Ogwe zuru ezu
FE 28mm F2 (SEL28F20) elu-edu obosara-n'akuku full-etiti
SEL057FEC Raara Onwe Ihe Ntụgharị Azụ na SEL075UWC Ultra Angle Ntụgharị maka SEL28F20 Frame zuru ezu
VCL-ECU2 / VCL-ECF2 (APS-C) Fisheye na Ultra Angle Ihe ntụgharị
Distagon T FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) ​​uzo zuru oke
Akụkọ mgbe ochie ZEISS ngwa anya arụmọrụ gosiri na nke a elu-elu, zuru-etiti obosara n'akuku, nke ga - abụ nhọrọ kachasị amasị ndị ọkachamara na ndị na - anụ ọkụ n'obi chọrọ ịse ihe osise ha, foto kwa ụbọchị na ọnọdụ abalị.
Site n'ile anya dị ntakịrị karịa naanị 0,3 m, SEL35F14Z bụ oghere mbụ nke ụdị E na-enye aọgba aghara ngwa ngwa F1.4. Ọ dị mma maka oke mmetụta bokeh (ndabere blur) na njikọta na oghere 9-agụba.
Nweta otu njedebe dị oke ọnụọbụna na widest aperture, ekele ya elu ngwa anya imewe incorporating aspherical ọcha na a Sony A mmewere.
Usoro DDSSM (Direct Drive SSM) na-enye ohere a ezigbo nkenke nke na-elekwasị anya, ma mgbe ị na-ese foto na vidiyo, ọbụlagodi na ala dị omimi miri emi, na mgbanaka oghere ya pụrụ iche nwere ike iji na-aga n'ihu ma na-aga nke ọma, dị mma maka ịdekọ vidiyo, ma ọ bụ usoro nke pịa nke ahụ na-enye nzaghachi dị ka ị na-ese foto gị.
Uzuzu ya na mmiri na-eguzogide ọgwụ na-eme ka arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya pụta.
FE 90mm F2.8 Medium Telephoto Macro Macro G OSS (SEL90M28G)
Emere ka inweta Ihe osise dị elu na imechi-emechi, na-enye nnukwu nchikota nke doro anya na ezigbo-bokeh, ekele maka iji nlezianya na-achịkwa aberration, ihe ngosi nke ọ bụla G. Lens nke mbụ telephoto macro na E-Mount nso na-agụnye Optical SteadyShot image stabilization (OSS), nke -enye gị ohere igba kristal doro anya oyiyi ruo 1: 1 magnification ọbụna handheld.
Usoro ya nke dị nwayọ ma dịkwa nwayọ Direct Drive SSM (DDSSM) na-eme ka otu abụọ na-elekwasị anya na-ese n’elu mmiri iji hụ na a nlezianya zuru oke, oké mkpa maka nnukwu foto.
Esịtidem elekwasị anya na-eme ka mkpokọta ogologo nke oghere mgbe nile, a oké uru mgbe ị bụ nanị ole na ole sentimita asatọ site na isiokwu ị chọrọ gbaa. O nwekwara bọtịnụ idozi mgbado na mgbanaka mgbanaka nke na-agbanwe ozugbo n'etiti ntuziaka na akpaghị aka.
Ọ na-eguzogide uzuzu na mmiri, na-enye gị ohere ị nweta nsonaazụ a pụrụ ịdabere na ya nke na-emechi nsị na ụmụ anụ ọhịa ụbọchị mmiri ozuzo.
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240) Mbugharị zuru ezu
Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ na ohere na-akparaghị ókè na-enweghị ohere Ọ na-edozi ọnọdụ ọ bụla, site na mbara ala na eserese eserese ruo na egwuregwu na egwu kachasị egwu. Nnukwu uzo 24-240mm ya (10x mbugharị) na-eme ka ụda telephoto a zuru oke ka ọ bụrụ ezigbo njem njem, na-ekpuchi ogologo oge site n'obosara na telephoto na-enweghị mgbanwe anya.
Nhazi ya gunyere ihe ise nke nkpuru osisi na akwa iko ED, na-enye aka na oru anya di nma na aru di mfe.
Ya gụnyere Ihe nkwụnye ihe oyiyi sistemụ Optical SteadyShot (OSS) na-enye gị ohere ịme freehand foto y ala ìhè Mpaghara, na ogologo ọsọ ọsọ. Dị ka igwe ọhụrụ FE ọ bụla, ọ na-eguzogidekwa aja na mmiri.
Anya dị mma nke abụọ iji kwado ihe ntinye oghere nke onye na-ese foto ọ bụla, ụdị 28mm a zuru oke zuru oke na-etinye a oghere kachasị na-enwu gbaa F2.0, ezigbo maka photographing freehand na ala ìhè. Ọ bụ fechaa, kọmpat, na e mere iguzogide uzuzu na mmiri.
Ọ bụ ezigbo enyi Sony, igwefoto igwefoto zuru ezu 7, ma gosipụta ngwungwu aluminom dị elu nke ga-amasị gị ozugbo igbe ahụ.
Su 9-agụba aperture okirikiri nwere ihe eji achọ mma atọ, gụnyere otu AA element (aspherical dị elu) na ihe ngosi iko ED abụọ na-eme ka njedebe dị nkọ na njedebe na ebe a na-elekwasị anya. All lens surfaces are multi-coated to suppress flare and ghosting from foto to backlighting .
A na-achịkwa usoro elebara anya n'ime dị elu linear moto na ana achi achi a autofocus dị jụụ, na-enye ohere ka ogologo nke oghere nọgide na-adịgide adịgide n'oge elekwasị anya.
VCL-ECU2 nnukwu-APS-C na VCL-ECF2 ndị ntụgharị ntụgharị azụ
Ndị ntụgharị a na-ekwe ka arụmọrụ nke arụmọrụ anya ka ha na-enyocha oke obosara na echiche fisheye.
Ihe nkwụnye VCL-ECU2 kwekọrọ na SEL16F28 16mm F2.8 na SEL20F28 20mm F2.8 (APS-C) anya m anya iji mụbaa arụmọrụ ha ruo 12mm (na SEL16F28) ma ọ bụ 16mm (SEL20F28).
Ihe ntụgharị azụ azụ nke VCL-ECF2 na-emepụta mmetụta ntụgharị uche dị oke oke, nwere oke omimi 180 Celsius maka SEL16F28, yana ogo 133 maka SEL20F28. Onye ntụgharị ọ bụla na - egosi ọhụụ ọhụụ ọhụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Ezinụlọ Sony? E-Mount na-etolite na anya m ọhụrụ na ndị ntụgharị na-agbanwe agbanwe
Ngwongwo Ngwongwo siri ike V: Onye nchikota akwukwo weputara ubochi na igbochi ya
ImageUSB: otu esi emepụta onyonyo diski nke eriri flash USB